Madaxweyne Gaas: “Somaliland xaqdaray ku socdaan waana la iska celinayaa wuxuushta caadaystay dhiigga shacabka!” (dhegayso) – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas: “Somaliland xaqdaray ku socdaan waana la iska celinayaa wuxuushta caadaystay dhiigga shacabka!” (dhegayso)
Maajo 16, 2018 7:45 g 2
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku sugan magaaladda Baydhabo ee xatrunta gobalka baay ayaa ka hadlay shirkii maanta lagu soo gabagabeyaay baydhabo ee looga hadlayay Arrimaha dastuurka dalka kaas oo qodobo laga soo saaray, isago waraysi gaar ah siyaay Radio Daljir.
Dhinaca kale madaxweynaha Puntland ayaa si kulul uga hadlay dagaalki shalay ka dhacay degaanka Tukaraq ee gobalka sool, kaas oo u dhaxeyaay Ciidamadda Puntland iyo kuwa somaliland isago sheegay in ciidamada somaliland cashar loo dhigay isla markaana la iska difaacay.
Gaas ayaa sheegay in somaliland gardaro ay ku socoto, isla markaana ay somaalinimo diiden balse la iska dhicin doono oo ciidamadda Puntland aysan u dulqadan doonin garadarada qaawan ee somaliland waddo.
Shacabka Puntland ayuu ugu baaqay in ay sharaftooda, dadnimadooda iyo dalkoodaba difaacdan, isaga oo sheegay in shacabka looga baahanyahay in ay iska difaacan cadowga ku soo duulay dhulkooda. Gaas waxa uu yiri, “waa la iska difaacayaa wuxuushta caadaystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed.”
Wariye Axmed sheekh Maxamed (Tallman), Daljir Boosaaso, ayuu u waramay Caawa.
Wasiiro Puntland katirsan oo booqday Jiida horre ee Tukaraq (Sawiro)
Qadhqadhka 2 years
Butuc Cabaad wayn bu si daynaya ķkkkkkkkkkk
Waar gaas yaanu dhiig somali oo daata ku, mana inuu catamo oo somaliland ku sheego wuxuush. Malahaa cadhaa ka keenteey e. Murankana wada hadal ha lagu dayo